Yakavanzika Policy | Hebei Chuangqi Vehicle fittings Co., Ltd.
1. Isu tinoshandisa ruzivo rwega rwunounganidzwa kuitira kuti tiise zvigadzirwa zvedu kana masevhisi zvinoenderana nezvakapihwa muPolisi Yakavanzika.
2. Mushure mekutora ruzivo rwako pachako, isu ticha de-dhata iyo data kuburikidza nehunyanzvi nzira. Iyo de-yakazivikanwa ruzivo haizo ratidza iyo yemunhu ruzivo ruzivo. Ndokumbirawo unzwisise uye ubvumire kuti mune ino kesi isu tine mvumo yekushandisa ruzivo rwakave rwakawanikwa-rwakaratidzwa; uye pasina kuburitsa pachena ruzivo rwako, tine kodzero yekuongorora dhatabhesi revashandisi toishandisa mushambadziro.
3. Tichaverenga mashandisirwo ezvigadzirwa kana masevhisi edu uye tinogona kugovera huwandu uhu neruzhinji kana vechitatu kuratidza mashandisirwo ezvese zvigadzirwa kana masevhisi. Nekudaro, izvi zviverengero hazvisanganise chero ruzivo rwako rwunozivikanwa.
4. Kana tikaratidza ruzivo rwako, tichashandisa ruzivo kusanganisira zvinyorwa zvinyorwa uye kusingazivikanwi kuti tidzivise ruzivo rwako kuchengetedza ruzivo rwako.
5. Kana tichida kushandisa ruzivo rwako pachako kune zvimwe zvinangwa zvisina kuvharwa nemutemo uyu, kana ruzivo rwakatorwa kubva kune chimwe chinangwa chezvimwe zvinangwa, tinokukumbira mvumo yako yekutanga muchimiro chekutanga kuita cheki.